सेयर बजारमा घट्दाको पीडा र बढ्दाको खुशी, नेप्सेको आँगनमा साँढेको बुर्कुशी ! Bizshala -
संसारमा सेयर बजार एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ लाखौं लगानीकर्ताहरुले करोडौं कमाउने सपना बुनेका हुन्छन् । मनमनै एउटा सपनाको घर बनाएका हुन्छन् । घर काठको होस् अथवा कागजको त्यो अलग कुरा हो, तर सपनीमा बनिराखेको हुन्छ । नेपालमा भर्खर भर्खर बिकास हुँदै गएको शेयर बजारको बारेमा धेरैले धेरै अनुमान लगाएका हुन्छन् । कोही भन्छन्ः शेयर बजार काँचको घर हो, जुनसुकै बेला चर्कन र टुट्न सक्छ ! कोही भन्छन्: शेयर बजार पानीको फोका हो जुनसुकै बेला फुट्न सक्छ ! तर म भन्छु शेयर बजार हजारौं खोलाको संगम समुन्द्र हो, आज खुत्रुके फुटाएर सानो लगानी गर्नुस् करोडौं रुपैयाँ शेयर बजारबाटै जुट्नसक्छ ।
यहाँनिर तपाईंले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छः नेपालमा के छ त्यस्तो प्रमाण र आधार जहाँ सानो लगानी गरेर मनग्य आम्दानी होस् ? केही समय पहिला नेपाली बजारमा आयको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको कुरा गरौं, जसले हरेक लगानीकर्तालाई ४० देखि ५० कित्ता सेयर दिएको थियो । मानौं, तपाईंको घरमा पाँचजना परिवार थियो, एकाघरको सेयर भर्न पाउने अधिकार धितोपत्र बोर्डले तपाईंमा सुरक्षित गरेकै छ । पाँचजना परिवारको मात्रै सयका दरले भरे पनि दुईसय कित्ता सेयर तपाईंले पाउनुभयो । जसको आज बजार मूल्य सत्रसय प्रतिकित्ता छ । सबै शेयर बेचेमा तीनलाख चालिस हजार तपाईंको हातमा ! छ महिना पहिलाको जम्मा लगानी बीस हजार मात्रै ! अब तपाईं आफैं भन्नुस्:खुत्रुके फुटाएरै भए पनि सेयरमा लगानी किन नगर्ने ? यो त मैले एउटा कम्पनीको मात्रै कुरा गरेँ, हरेक महिना बजारमा यस्ता कम्पनीमा लगानीको अवसर आइरहेको हुन्छ ।
यो भयो प्राथमिक बजारको कुरा, अब दोस्रो बजारतिर लागौं । के दोस्रो बजारबाट पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने जति मनग्ये पैसा कमाउन सम्भब छ त ? यो प्रश्नको जवाफभन्दा पहिले म विश्व सेयर बजारका गुरु वारेन बफेटको जीवनी र त्यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठतर्फ लग्छु । अमेरिकाको नेब्रास्कामा सामान्य परिवारमा जन्मेका, हाल उमेरले नब्बे वर्षीय बफेटले पहिलोपटक ११ वर्षको उमेरमा सेयरमा लगानी गरेका थिए । उनका बाबुको सेयर ब्रोकर कम्पनी थियो । बाबुसँग अफिस जाँदा आउँदा सेयरको बारेमा केही बुझेका बफेटले पहिलोपटक ३८ डलरमा एउटा कम्पनीको सेयर खरिद गरेका थिए । उनले खरिद गरेपछि सेयरको मूल्य घटेर २७ डलरमा आयो । केही समयपछि उक्त सेयरको मूल्य बढेर ४० डलर पुगेको के थियो उनले बेचिहाले । त्यसको केही समयमा सेयरको मूल्य बढेर दुईसय डलरसम्म पुग्यो । यो देखेर उनका बाबु खिस्स हाँस्दै एउटा हिउँको डल्लो हातमा लिएर भनेः हेर बाबु यो डल्लोलाई तिमीले जति जति पुनः हिउँमा गुड्काउँछौं, त्यति नै ठूलो ठूलो हुन्छ । यसले त्यति नै बढी हिउँ बटुल्दै जान्छ, तिमीले गरेको लगानी पनि यसरी नै बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ । सेयरमा धैर्यता महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछि बफेटले केही राम्रा कम्पनीको सेयर आजसम्म पनि बेचेका छैनन् । आज बफेटको नेटवर्थ ८० अर्ब डलर छ । उनको सुरुवात हजार डलरभन्दा बढी होइन, अनि के संभव छैन त सेयरबाट करोडौं कमाउने सपना साकार पार्न ?
अब आऔं, नेपालकै सेयर बजारका कथा र ब्यथातिर । जहाँ कथा हुन्छ, व्यथा पनि त्यहीँ हुन्छ । तपाईंहरुले भन्नुहोला अहिले बजार बुल बुल भएको बेला कथा र ब्यथाको कुरा किन ? बजार के हुन्छ ? हामीले बिगत र इतिहास भुल्न हुँदैन किनकी इतिहासले भविष्य बताइरहेको हुन्छ । नेपालको ब्यापारमा खासगरी मारवाडी समुदाय अगाडि छन् । उनीहरुले खरिद गर्ने ब्रोकर र स्क्रिप्ट बजारमा खोजी खोजी हेरिन्छ ।
यस्तै, नेपालको सेयर बजारमा निर्मल प्रधान नयाँ नाम र धेरैले सुनेकै नाम हो । लामो समय फिल्म उद्योगमा नाम र दाम कमाएका प्रधानको बारेमा हामीले बुझ्न र जान्न किन आबश्यक छ भने हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले के गल्ती गर्यो ? हामीले जान्ने, सिक्ने र बजारबाट कमाउने भनेको अघिल्लो पुस्ताले गरेको गल्तीबाट पनि हो । प्रधान आफैंले स्वीकार गरेका छन् कि उनी एकैपटक फिल्म उद्योगबाट सेयर बजारमा केही नबुझी पसे र फसे पनि । उनीसँग एकपटक ०६५ सालमा नै १४ अर्बको पोर्ट्फोलियो थियो तर, त्यो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न नजानेका उनी आफैं र उनी निकट बताउँछन । सेयरबजारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र जेरो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी निकै उपयुक्त हुन्छ ।
के हो त जेरो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी ?
जब बजार बढ्दै बढ्दै जान्छ, तपाईंको लगानीबाट दुई तीन गुना आम्दानी भएपछि आफ्नो लगानी बजारबाट झिक्नुस्, नाफाको सेयर मात्र बजारमा छोड्नुस् र लोन तिर्नुस् । प्राय ः सबैले नै लोन र सरसापटबाट लगानी गरेका हुन्छौ र राम्रो नाफा हुँदा लगानीलाई जेरो बनाएनौ भने गल्ती त्यही हो । जब हाम्रो नाफाको सेयर मात्रै बजारमा छोडेपछि बजार जे भए पनि के फरक ? बजार बढ्दै गए त्यही सेयरले कमाउँदै जान्छ, घटे फेरि किन्ने अबसर हुन्छ । यो भयो लगानीको सामान्य तरिका ।
के होला अबको बाटो ?
शेयर बजारको पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने करोबारले जुन साथ दिएको छ, यो धेरै उत्साहित र मजबुत भएको बताउँछ । इन्डेक्ससँगै करोबारको भोलुम पनि बढेको छ । नेपालको सेयर बजार अब दुरदराज मात्रै होइन संसारकै कुना कुना पुगिसक्यो । पन्ध्र सयमा लामो समय टिकेर माथि आएको बजार अबको केही महिनामा पच्चीस सय माथि नै हुन्छ ।
के छन् त आधारहरु ?
पहिलो आधार हो बजारमा तरलता बढ्नु र ब्याजदर घट्नु । यो सबै बजारको बियरिस चक्रको अन्तसँगै कोभिड १९ असरले भएको हो । यहाँनिर अनौठो संयोग के बनेको छ भने कोभिड १९ र शेयर बजार बीच सकारात्मक कोरिलेसन बनेको छ, जसको रेखाचित्र सँगसँगै माथि जान्छ । यो अझै छ महिना यस्तै हुने निश्चित छ । एउटा स्कूल पनि राम्रोसँग नखुलेको अवस्थामा उद्योगधन्दा खुलेर तरलताको अभाव होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।
बीचमा बजार सयदेखि एकसय पचाससम्मको करेक्सन स्वभाविक भएर पुनः आगामी तेस्रो क्वार्टरको बैंकहरुको चमत्कारिक रिपोर्टले मार्केट पच्चीस सय माथि नै पुग्छ । लगानीर्ताले लगानी गर्दा जहिले पनि आफ्नो क्षमता, पैसाको स्रोत र आम्दानीको स्रोतलाई ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ ।
arjun timilsina nepal stock exchange bull market
ग्राउण्ड जीरो : ब्रोकर हाउसमा सीआईटी र एनसीसीको चर्चा, बैंकका
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आइतबार सधैँझैँ...
काठमाण्डौ । सानिमा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित हुने ‘सानिमा...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेपाल क्रेडिट एन्ड...
झनै बलियो बन्यो लगानीकर्ताको मनोबल, ‘अहिले हालेको पैसा
काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक दोहोरो...
काठमाण्डौ । नेपालको सेयर बजारमा आज एकैदिन ३ वटा नयाँ कीर्तिमान कायम...
आईपीओ प्रभाव : चन्द्रागिरी केबलकार चढ्नेको ओइरो
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी केबलकार चढ्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको...
५० कित्तासम्म माग गर्ने सबैले निफ्राको आइपीओ पाउने, बाँडफाँड
काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड(निफ्रा)को आईपीओमा...
आजदेखि कारोबार राफसाफ २ दिनमै, क्लोजआउटमा परिएला नि ?
काठमाण्डौ । आज(आइतबार)देखि राफसाफ तथा फछर््र्यौट २ कार्यदिनमै हुने...